ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ခွေးများအပေါ် Katz : ခွေးများနှင့်အတူသင်တန်းများနှင့်အသက်ရှင်ဖို့အအသိဉာဏ် Guide ကို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဒီဇင်ဘာ. 08 2019 |9မိဖတ်ပြီးသား
ငါတို့သည်တလုံးတအိမ်ကိုဆောင် ခဲ့. ရှေ့တော်၌အခွေးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအကြောင်းကိုအရေးအကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမကြာခဏထားကြပါတယ်. အမေရိကရှိတစ်ဦးခွေးကိုခံထားသူ disturbingly ဖြစ်ပါသည်
လွယ်ကူသော. သင်အွန်လိုင်း trawl နိုင်, တစ်ဦးမျိုးဆက်များရှာတွေ့, ဒါမှမဟုတ်စူပါမားကက်ပြင်ပအချို့သောဆိတ်သငယ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကခွေးပေါက်စတကောင်ကိုယူ (ငါအကြံပေးမည်မဟုတ်). ခင်ဗျား
ထွက်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်မောင်းနှင်မှုနေစဉ်သွေဖြတ်ပြီးလာစေခြင်းငှါ,. အချို့လူများကကျောက်ခက်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ခွေးရှာခြင်း: လုံခြုံရေး, အမဲလိုက်, ကုထုံး, ရှာဖွေရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေး. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အများစုက, စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ behaviorists ပြော, ပိုမိုရှုပ်ထွေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိသည်.
သာ. ဒုက္ခလူသားတွေအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချိတ်ဆက်ပါပြီ, သာ. သူတို့ခွေးကိုဖွင့် (နှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ) ကွက်လပ်အချို့ကိုဖြည့်စွက်ရန်. ကျနော်တို့ချစ်ရန်လိုအပ်ပုံရသည်နှင့် Uncomplicated ဖြစ်ကြောင်းလမ်းခရီးတော်၌ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရ, သန့်စင်သော, နှင့်အားကိုး.
ခေတ်ပြိုင်အမေရိကတိုက်ဖြစ်ပါသည်, နည်းလမ်းများစွာအတွက်, စိတ်စိတ်အမွှာမွှာ, detached လူ့အဖွဲ့အစည်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းချုပ်မိသားစုများရှားပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ; ကျွန်တော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းမသိကြပါ; ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားညဉ့်အခါထ Hole, တမျက်နှာပြင်၏ကြင်နာသို့မဟုတ်အခြားစိုက်ကြည့်ခြင်း. ကွာရှင်းအထူးအဆန်းဖြစ်. အလုပ်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, လူများအဘို့အမရေရာမသေချာ, မကြာခဏမနှစ်မြို့ဖွယ်. လူအတော်များများဟာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူထက် ပို. လွယ်ကူကြောင်း, အသက်ရှင်သောခွေးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှရှာတွေ့သွားပုံပေါက်, ဒါကြောင့်လူသားနှင့်ခွေးအကြားချည်နှောင်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းပိုမိုအားကောင်းကြီးထွား.
သို့သော်လည်းဤနှစ်ခုမျိုးစိတ်ဆက်ဆံရေး၌ဤဖွံ့ဖြိုးရေးတဖက်သတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အများစုကခွေးကောင်းစွာသောလူသားများ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ’ နက်ရှိုင်းပူးတွဲမှု, ဒါပေမယ့်ခွေးအလားတူရွေးချယ်မှုများအောင်မနိုင်. ဒါဟာအကြီးအခွေးတစ်ကောင်ကိုမေတ္တာကိုအရေး spawned မူကြောင်းကိုလူ့လိုအပ်ချက်င်.
လူသားတွေဟာသူတို့ဘဝ၏ဗဟိုချက်သို့ခွေးကိုရောက်စေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ. အဟိတ်တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်အပျော့သွားတာကိုများအတွက်, ခွေးအဘယ်သူမျှမရှိသည်. သူတို့ကစားသုံးသူဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမ. သူတို့ကသူတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်သမျှအဘို့အကြှနျုပျတို့အပျေါမှီခိုင်. သူတို့ကပြန်မပြောနိုင်; သူတို့သည်နောက်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့မဟုတ်အနာဂါတ်နှင့် ပတ်သက်. ပြောပါပြီ.
ခွေးနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလလူသားများနှင့်အတူကူညီလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်, သူတို့မှတစ်ပါးအခြားအရာတစ်ခုခုအဖြစ်မြင်စေခြင်းငှါလာကြပြီးပြီကိုသာမကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းကန် (ထက် ပို.) တိရိစ္ဆာန်များ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-စောင့်ရှောက်အလယ်ခေတ်ကာလ၌ချမ်းသာကြွယ်နှင့်အစွမ်းထက်တို့တွင်အရေပန်းစားခဲ့သည်, စာအုပ်ကိုတိရစ္ဆာန်များအတွက်တိရစ္ဆာန်အ ethicist ဂျိမ်းစ် Serpell နှင့်လူ့ Society ကမှတ်ချက်ပြု: ပြောင်းခြင်းသ က်., ဒါပေမယ့်နှောင်းပိုင်းခုနစ်ရာစုအထိကျယ်ပြန့်လေးစားမှုကိုရရှိဖို့ဘဲ, သိပ္ပံနှင့်သဘာဝအလျောက်သမိုင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အတိုးလာတာနဲ့အမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဘို့အကြီးထွားလာစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အချိန်’ သက်သာချောင်ချိရေး. ထိုကတည်းက, ခွေးကျွန်တော်တို့၏ပူးတွဲမှုသိသိသာသာပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်. ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကအခြားမျိုးစိတ်နိုင်ရန်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖူး. ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အသောင်းကိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ဖြုန်း, နို့တိုက်ကျွေး, နှင့်အပန်းဖြေ; သူတို့ကိုလူ့အမည်များပေး; သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါကကဲ့သို့သူတို့ကိုစကားပြော; သူတို့ပြန်လာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေကြတယ်ဆိုတာကိုသိယုံကြည်.
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအတွက်ခွေး entangles နှင့်လိုလား. ဒါဟာယခုဘုံနေရာဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ပင်မျိုးဆက်တစ်ဆက်လွန်ခဲ့တဲ့ထိတ်လန့်ခဲ့ကြလိုသော်လည်း, နားကြားဖို့လူတွေကိုသူတို့ကသူတို့လူအများစုမြတ်နိုးတာထက်သူတို့ရဲ့ခွေးတွေကိုပိုပြီးချစ်ကြောင်းတောင်းပန်စကားသို့မဟုတ်အရှက်မပါဘဲပြော, မိမိတို့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သူတို့၏ခွေးကိုမြင်သော, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ခွေးတွေကသူတို့ရဲ့အရငျးနှီးဆုံးပြဿနာတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရင်ဖွင့်ကြောင်း, မိဘများထက်ပိုအပေါ်သစ္စာနှင့်နားလည်မှုနေသော, သတို့သားနှင့်သတို့သမီး, မိတ်ဆွေတို့ကို, သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ. တစ်ဦးစာအုပ်အဘို့အကြှနျုပျ၏သုတေသန၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် vet ၏ရုံးခန်းထဲမှာရက်အနည်းငယ်ဖြုန်း, ကျနော်လည်းတခြားစေ့ဆော်ပြီးနောက်မိန်းမတယောက်ကနားကြားဖို့တအံ့တသြခဲ့သည်, “ကြည့်ရှု, ဆရာဝန်, ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းမရှိဘဲအသက်ရှင်နိုင်, သင်မူကား, ဒီခွေးကိုကယ်ဖို့ရရှိပါသည်!” သို့သော်လည်း vets သူတို့သည်နားထောင်သူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ငါ့အားပြော.
ထိုမျှမကပဲအမျိုးသမီးတွေထဲကနေ. အမူအကျင့်သုတေသနလုပ်ငန်းသူတို့စိတ်ခံစားမှုကိုထောက်ခံသည့်သေးသောရှုပ်ထွေးပြီးထင်ရသောကြောင့်အမျိုးသမီးများအစိတ်အပိုင်းအတွက်ခွေးချစ်ကြောင်းပြသ, တစ်သော်လည်းလေးနက် wordless လမ်းမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါ. ဤအတောအတွင်း, သူတို့သည်စုံလင် pals ကြောင့်ယောက်ျားခွေးကိုချစ်, သောနေရာများသို့ သွား. အမှုတို့ကိုပြုမှမင်္ဂလာရှိသော, ဒါပေမယ့်နိုင်ခြင်းစကားပြောဆိုချက်တွေကိုကိုင်ထားသို့မဟုတ်ရန်တောင်းဆို. ကလိုပဲသို့မဟုတ်မ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေး’ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်ဆံခဲ့ကြရာလမ်းဆက်ဆံဖို့လေ့, ကြှနျုပျတို့သ 'd ဖြစ်ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်လမ်း. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတိတ်အလွန့်အလွန်ခွေးနှင့်ထိုသူတို့နှင့်ငါတို့သည်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနည်းလမ်းတွေအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားများပုံဖော်.
ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးသတိလစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်. အနည်းစုကပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ခွေးတစ်ကောင်ကိုဆက်ဆံရေးကိုများစွာ Self-အသိပညာကိုရောက်စေသို့မဟုတ်သူတို့သည် လာ. မိမိတို့ခွေးမှာအော်ဟစ်သောအခါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုများအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်, သို့မဟုတ်သူတို့ကို coo သူတို့နားလည်သဘောပေါက်လျှင်အဖြစ်. သူမအိမ်ပြန်လာသောအခါငါသိတစ်ဦးကကျောင်းသူနာပြုညတိုင်းနာ​​းအားဖြင့်သူမ၏ခွေးကိုဆွဲ, အော်, “မင်းကိုယ့်ကိုချစ်လား? ငါသည်သင်တို့၏မွှေးသောမေမေက Am?” ခွေးလူတန်းစားပေါင်းစုံစဉ်အတွင်းပယ် run ဖို့ကြိုးစားခဲ့အဘယ်ကြောင့်သူမဟာအံ့ဩခြင်း.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုခွေးရတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအရေးကြီးသောဖြစ်လာ, သင်သည်၎င်း၏သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ကြတယ်နှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းလိုလျှင်. ဒါကြောင့်လူတစ်ဦးထံမှတစ်ဦးကိုမှီခိုထက်တိရစ္ဆာန်အမှပေါင်းသင်းရှာခြင်းကပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်-a-ခွေးတစ်ကောင်မေးခွန်းကိုသင့်အဖြေသည်? မကြောင့်သင်တို့ကို subliminal ကို TV ကနေမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ရုပ်ရှင်၏တစ်ဦးကိုခွေးစေချင်? သင်လေ့ကျင့်ရေးဖို့ထက်သတ္တဝါအားလုံးကိုကယ်ဆယ်သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်နေရန် ပို. နောက်သို့ Are?
ကြှနျုပျတို့သဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့သည်လမ်းခရီးတော်၌ဆုံးမပါနဲ့, ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းပြီးနာခံမှုနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၏အဆင့်ဆင့်ကိုမေး, ကျွန်တော်တို့ကြားအသံတွေကိုစကားမှာသူတို့ကိုဝေဖန်? အသက်ကြီးမိသားစုပြဇာတ် reenacting နေကြ, စိတ်ဒဏ်ရာအနာကိုပျောက်စေရန်ကြိုးစားနေ? ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့အိမ်သူအိမ်သားအတွက်တခြားတယောက်ယောက်ကတစ်ဦးခွေးသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူဆန္ဒရှိသည်ဟုပြောနိုင်သလား, ချစ်သော်လည်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်မသာ?
သူမကတစ်ဦး gritty အတွက်စိတ်မချရသောကြောင့်ခံစားခဲ့ရဆူဆန်အမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသူမတစ်ဦးကိုခွေးချင်ကပြောတယ်, ဧလိရှဗက်အတွက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးရပ်ကွက်အတွင်း, နယူးဂျာစီပြည်နယ်. ဒါကြောင့်သူမရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်သည်မကြာမီသူ့ကိုသွားပေးကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်အလွန်ကြီးမားသည့်အင်္ဂလိပ် mastiff တယ်, မိုးကြိုးအမည်ဖြင့်မှည့ထို့နောက်ဂျာမန်သိုးထိန်းသည်. ခွေးကိုထိရောက်စွာအိမ်တော်ကိုကာကှယျပေး, ဧည့်သည်များကချီလာကြသောအခါအိမ်ရှေ့တံခါး charging. သို့သော်နောက်ပိုင်းဆူဆန်, သူတစ်ဦးက New Jersey ပြည်နယ် Transit စပယ်ယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်, သူမခွေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အတွက်အနည်းငယ်နှင့်အတိုးကဆင်းရဲတဲ့သင်တန်းဆရာဖြစ်ခံ, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများလာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါသူမသည်မြေအောက်ခန်းတွင်မိုးကြိုးသော့ခတ်ဖို့ရှိပါတယ်. သူမသည် 's ဖျက်စီးရမဲ့မေးလ်၏မရေမတွက်နိုင်သောအပိုင်းပိုင်းတွေ့ရှိရန်အိမ်ပြန်လာ; ခွေးနားလည်ပါတယ်တဲ့အန္တရာယ်ကိုအဖြစ်တံခါးကို slot ကနေတဆင့်လာမယ့်စာအိတ်မြင်သည်. သူမသည် 's လည်းခြစ်တံခါးများကျိုးပဲ့ပြတင်းပေါက်အစားထိုးဖို့ခဲ့.
ယခု by, မိုဃ်းချုန်းကိုးဆယ်ပေါင်အလေးချိန်ရှိပြီးသူမကသူ့ကိုထုတ်ကြာလာသောအခါရှိသမျှကိုလမ်းဘေးစင်္ကြံကျော်ဆူဆန်ဆွဲယူ. အိမ်နီးချင်းနဲ့သူတို့သားသမီးတို့သည်သူ့ကိုထိတ်လန့်နေကြတယ်, သူကတကယ်တော့မည်သူမဆိုကိုက်သို့မဟုတ်ထိခိုကျဘယ်တော့မှမယ်သော်လည်း. ခွေးအသိစိတ်အဖြစ်ရန်လိုသိပ်မထင်ပါဘူး; သူသည်ပြုပါဖို့ငှားရမ်းခဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်, မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုရဲ့သားကောင်. သို့သော်ဆူဆန်, သူမမိုးကြိုးချစ်သောသူကပြောပါတယ်, သူမတကယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘို့အလိုငှါခွေးချင်တယ်ဘယ်တော့မှခံ. သူမသည်ဖြစ်နိုင်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခုခံကာကွယ်သင်တန်းကိုယူကြပြီသငျ့သ​​ို့မဟုတ်အစားလုံခြုံရေးအချက်ပေးကိရိယာကုမ္ပဏီဟုခေါ်. “ဒါဟာရေရှည်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်, လွယ်ကူ။”
ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုခွေးချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နားလည်ခြင်းသည်ညာဘက်သူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဗဟိုဖြစ်ပါသည်, စနစ်တကျသင်ကြားပို့ချပေး, ပျော်ရွှင်စွာသူတို့နှင့်အတူနေထိုင်နေ. သာ. ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်အကြောင်းနာ​​းလည်ဖို့, ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမျိုးစိတ်အဘို့လုပ်ဖို့များပါတယ်ပိုကောင်းရွေးချယ်မှုများ.
သင်စဉ်းစားသည့်အခါ, သင်ဖြစ်နိုင်သူတို့ရဲ့ခွေးတွေသိပ်တက်ကြွလွန်းသို့မဟုတ်လွန်း sedentary ဖြစ်ကြောင်းတိုင်ကြားသူတွေကိုများများသိ, ခေါ်ဝေါ်သောအခါလာရန် Squirrel သို့မဟုတ်လွန်းမဆိုင်ပါဘူးလိုက်ဖမ်းအတွက်လွန်းစိတ်ဝင်စား, အိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်ထို့ကြောင့်လည်းအကာအကွယ်ပေးသူတို့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေထွက်သယ်ဆောင်ကူညီချင်ပါတယ် nonthreatening. ခွေးအများအားဖြင့်အပြစ်တင်ရရှိသွားတဲ့သော်လည်း, အဖြစ်မကြာခဏပိုင်ရှင်တစ်ဦးကံမကောင်းသို့မဟုတ်နေမကောင်း-စဉ်းစားရွေးချယ်စရာလုပ်သကဲ့သို့မပေး. အကျိုးဆက်, ခွေးသည်အဘယ်အရာကိုထက်အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့ဖိအားအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်, လူသားအပြည့်အဝကိုသူတို့လက်ရှိစဉ်အခါ. အနည်းငယ်အတွေးနှင့်သုတေသနနှင့်အတူ, ခွေးနှင့်၎င်းတို့၏လူများ၏ဘဝများကိုတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုစိတ်ကျေနပ်စရာရှိနိုင်ပါသည်. သို့သော်တဦးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ခံစားမှုအချို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်မ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကိုယ့်ဘဝ၌ရှိကြ၏နှင့်မည်သို့ကျွန်ုပ်တို့ခွေးအတွက် fit နေရာအကြောင်းကိုအချို့သောအတွေး. ဂျင်မ်, နယူးယောက်အထက်ပိုင်း၌အကြှနျုပျအနီးနေထိုင်သောသူတစ်ဦးမုဆိုး, ကြီးမားသော kennel အတွက်သုံး beagles စောင့်ရှောက် 360 လက်ထက်တစ်နှစ်ကို. သူတို့ကဂိမ်းကိုခြေရာခံဖို့ကျန်ငါးရက်အနည်းငယ်နံနက်နာရီပေါ်ထွက်လာ. သူတို့ကအချိန်စောင့်ဆိုင်းတွေအများကြီးဖြုန်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကြွလာသောအခါ, သူတို့ kennel ထဲက ထွက်. ရှိရာတောအုပ်သို့ပစ်သတ်. “သူတို့သည်များစွာသောခွေး,” Jim ကပြောပါတယ်, အဘယ်သူသည်တိုင်အောင်သူတို့ကိုအမည်မခဲ့သည်.
သူတို့ကိုကိုယ်တော်ရှိခြင်းကြိုက်ပါသလား? တစ်ခါတုန်းကသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်. “ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလုပ်အကိုင်များကိုကျင့်သောအခါအကျွန်ုပ်ပြုပါ,” သူ့ရဲ့တုန့်ပြန်ခဲ့. ကျွန်မအားဖြင့်ကားမောင်းသောအခါငါခွေးအဘို့အ reflex စိတ်မကောင်း, ငါသည်ကိုယ်ခွေးတွေကိုစဉ်းစားသည့်အခါအထူးသဖြင့်’ pampered ဘဝတွေကို, ဒါပေမယ့်ဂျင်မ်ရဲ့ခွေး, သူတို့အသံကျယ်ပါတယ်နေစဉ်, သူတို့ဆုံးရှုံးနေကြရသည်ကိုသိရန်မထင်ကြဘူး. အားလုံးမဟုတ်ခွေးကလမ်းအသက်ရှင်နိုင်. သို့သော်ဂျင်မ်ရဲ့ beagles ခွေးတို့သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်လိုက်လျောပြုပြင်သရုပ်ပြ. သူတို့ကအမဲလိုက်ခြင်း, ထိုအရပ်၌င်, ကာလ. Jim ကသူမြှုပ်နှံမယ့်အဘယ်သူကိုမှဇနီးတစ်ဦးနှင့်သားသမီးလေးယောက်ရှိပါတယ်, သူသည်မိမိအဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေမယ့်; သူသည်မိမိအဝါသနာသို့မဟုတ်သူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ခွေးမလိုအပ်ပါဘူး. တစ်ရက်ပြီးတာနဲ့, အသားနဲ့စားကြွင်းစားကျန်ပုံးတစ်ပုံးနှင့်အတူ kennel မှထွက်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့နှင့် kennel သို့ contents တွေကို tosses. ခရစ်စမတ်မှာ, သူကစ်ပုံးတစ်ပုံးကထပ်ပြောသည်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရိုက်ချက်များရရှိမည်, သူတို့ဖျားနာနေတာပါလျှင်တစ်ဦး vet ကြည့်ရှု. အဆိုပါ beagles သူ့အိမ်အတွင်း၌ဖူး. သူကဂုဏ်ယူစွာနဲ့ fondly သူတို့ကိုပြော, ဒါပေမဲ့သူတို့ tools တွေကိုင်, တစ်ဦးစစ်ရေးလေ့ကျင့်သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုရိုင်ဖယ်တူ, နည်းနည်းမကလူ, ခေတ်ပြိုင်သဘောမျိုးအတွက်ပင်မယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ. သို့ရာတွင်ခွေးအကြောင်းအရာနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းပုံရတယ်. သူတို့ကိုကိုယ်တော်လိုလားအတိအကျဘာကြောင့်ဂျင်မ်သိတယ်. သူတို့ကရိုးရှင်းပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်, ခွေးအချိန်တို့၏ကျမ်းပိုဒ်၏လူ့အသိပညာကင်းမဲ့ပြီးကတည်းက, သူတို့ Hunt အကြားသွားအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမသိရပါဘူး. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားခွေးရှိသည်ရန်ဆန္ဒရှိတဲ့လမ်းမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူလိုလားခွေးမျိုးနှင့်အဘယ်ကြောင့် ပတ်သက်. မိမိ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံရတယ်.
ထိုအခါ Andrea ကရှိတယ်, ဗားမောင်တစ်ငါ​​းဆယ်ဧကစိုက်ခင်းတွင်နေထိုင်သောအသက်အနုပညာရှင်တစ်ဦး. အမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သူမကိုလူတို့အယူအဆပေါ်တွင်တက်ပေးထားသောင်, မင်္ဂလာဆောင်, တစ်မိသားစု; အစားအ, သူမကတစ်ဦးဒေသဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုထွက်ရှာသော်လည်းမတွေ့. သူမ, လွန်း, သူမတစ်ဦးကိုခွေးချင်အတိအကျဘာကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်, သူမအဲဒီကဗျာနဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရဲ့နှောင်ကြိုးထိုနှစ်ပါးပျော်ရွှင်စေပုံပေါ်.
“ကျွန်မနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုကံကောင်းမဖြစ်ပါပြီ, အနည်းဆုံးမသေး,” သူမကပြောပါတယ်. “သို့သော် Whisper နဲ့ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုးကွယ်ခြင်း. သူ့ကိုငါနှင့်အတူသိပ်ပျော်စရာရှိသည်, သူသည်ငါ့ကိုအဤမျှလောက်သက်သာခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးတော်မူ၏. ကျနော်လည်းတခြားဆက်ဆံရေးသူမက 's တံတားမျှော်လင့်, ဒါပေမယ့်သူမကမပါလျှင်, ကျွန်မအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။”
ငါ့ကိုအပြောအပ်သည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်အမှန်တရားမှာငါတကယ် Andrea ကပညာရှိသို့မဟုတ်ကျန်းမာသောရွေးချယ်မှုကိုဖန်ဆင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး. သို့သော်သူမသည်သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်စဉ်းစား, ခွေးသူမ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ fit မယ်လို့ဘယ်လိုအကြောင်း, သူမကတစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချ.
“ငါ့ဆိတ်သငယ်အဘို့အတတောင်းစားခဲ့လို့ပဲ” ဖြစ်, သို့သော်ငြားလည်း, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆည်းပူးဖို့များသောအားဖြင့်တစ်ဦးသံသယရှိသူအကြောင်းပြချက်. ဒါဟာသာမန​​်ရှောင်ကြဉ်င်, တောင်းဆိုအမျိုးသားတို့အဘို့ခရစ္စမတ်အံ့သြဖွယ်များမကြာခဏကတစ်ကြမ်းတမ်းသောအချိန်ရှိသည်အဖြစ်ဒါပေမယ့်ခွေးကိုဝယ်ယူ. ကတိတော်များကို လုပ်. , မေ့လျော့နေရ; ထိုမျက်နှာသစ်ထွဋ်စိတ်ဝင်စားမှု, ထို့နောက်မဆုတ်.
မအမြဲ. သတ္တုတွင်း၏တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့နှစ်အရွယ်အိမ်နီးချင်းခရစ္စမတ်များအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ရွှေ Retrievers အဘို့တောင်းလျှောက်နှင့်သူ့မိဘများသဘောတူခဲ့, ဂျယ်ရမီကတာဝန်ယူသောအခြေအနေပေါ်တွင်. ယေရှုသည်ယခုပင်သူ့ရဲ့ငါးကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့် hamster အိတ်များအထဲကသန့်ရှင်းရေးကသူ၏ကတိကဝတ်သက်သေထူခဲ့ချင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ည့်တော်တို့သည်အမှန်တကယ်အလိုတခုတည်းကယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခဲ့.
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်, ဂျယ်ရမီ Clancy ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုယူမ. သူကကျောင်းမှာမတိုင်ခင်နဲ့အပြီးသူ့ကိုသာသွားလာ, သူ့ကိုကျွေးမွေး, သူ့ကိုတိုးဝှေ့နေတယ်, တိုင်းစနေနေ့သင်တန်းများမှသူ့ကိုကျော်အောင်. ကျောင်းမှာအပြီးနေ့ရက်တိုင်း, အတူတကွဂျယ်ရမီနှင့် Clancy ရထား. ခွေးခေါ်ဝေါ်သောအခါလာတတ်ရန်သင်ယူခဲ့သည်, ထိုင်ရန်, နေခြင်း, နှင့်အမိန့်အပေါ်လျက်အိပ်. 4-H ကိုအစီအစဉ်များနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ကျေးလက်ဒေသတွင်ပြည်သူ့သားသမီးတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်တာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကျန်းမာသိ. ကလေးသူငယ်ရှိလူများ- စိုးမိုးရေးမကြာခဏဖြစ်ဟန်ဘယ်မှာနှင့်ခွေးကို-ရောဂါတော်တော်လေးထနေချိန်မြို့နှင့်မြို့နယ်, ခြံဝင်းငယ်, ခွေးအပိုက​​ြီးကဘယ်လောက်ပုံမှန်မဟုတ်သောသိ. ဂျယ်ရမီများအတွက်, ခွေးလာပြီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာပါတူပုံပေါက်ပေ; သူသည်မိမိအနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမစောင့်, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသူ့မိဘတွေကိုသူကစောင့်ရှောက်သောဇွတ်အတင်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောခြေလှမ်းကိုယူ. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ငါသည်သူ့ကိုတူအနည်းငယ်ကလေးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်. မိဘများ, သတိပြု: အိမ်ထောင်စုတစ်စုအတွက်လူတယောက်ကခွေးသည်အဓိကတာဝန်ယူထားပါတယ်, နှင့်ကလေးတွေမပြုလျှင်, mom သို့မဟုတ်ဖေဖေအတွက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်.
မိဘများအနေမကြာခဏသူတို့ထင်သောအရာတို့ကိုသူတို့အားဆဲလ်ဖုန်းအဘို့အကောင်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေပေး, ကွန်ပျူတာများ, ထိုအမှုအရာတို့ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ကုသလိမ့်မည်ဘယ်လိုအကြောင်းအများကြီးအတွေးမပါဘဲခွေး.
အဖြေမယ်ဆိုရင်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ခံစားမှုသမိုင်းကိုအဓိကအားထား (ငါနှင့်အတူအဆက်ဆက်အမှုကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့), သင်နားလည်ဖို့သေချာပါစေနှင့်သင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏မေးနေကြတယ့်အဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထင်. ခွေး anthropomorphizing ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အကျင့်ရပေမယ့်, သူတို့သည်ငါတို့လှမ်းစဉ်းစားအဘယ်အရာကိုနားမလည်ကြဘူးနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြည့်စွက်ရန်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သဘောပေါက်လို့မရဘူး. စနစ်တကျရွေးတော်မ အကယ်. သူတို့ကငါတို့အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် amiably ပြုမူလို့မရပါဘူး, ကျင့်သုံး, နှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြား. ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်များသောအားဖြင့်အများကြီးလည်းမြင့်မားဖြစ်တဲ့အတွက်, ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူ, ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်လာ. ကျွန်တော်တို့ပြဿနာခွေး biters ဖန်တီးပေးနေကြောင်းသိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, chewers, Barker, antidepressants ၏လိုအပ်ချက်အတွက် neurotics. ထို့ကြောင့်လူအတော်များများမှားအကြောင်းပြချက်များအတွက်မမှားအချိန်များတွင်မှားခွေးရဆိုတော့ဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပျက်. ခွေးအပေါ်ယူပြီးတစ်ဦးကိုယ်ကျင့်တရား component တစ်ခုရှိပါတယ်. သူတို့ high-level ကိုအတွေးဖြစ်စဉ်များနိုင်စွမ်းမဟုတ်ပေမယ့, ခွေးဆက်ဆက်စိတ်ခံစားမှုရှိသည်. သူတို့ကနာကျင်မှုနှင့်အရှုံးကိုကြုံတွေ့, ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ချစ်ခင်စုံမက်. ဒီသူတို့နှင့်အခြားသောတိရိစ္ဆာန်များသြတ္တပ္ပလူတို့တွင်အချို့သောကိုယ်ကျင့်တရားရပ်လျက်ပေးတော်မူပြီ. ဒါဟာသူတို့ကိုသားသမီးများ၏ညီမျှစေမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကုသဘယ်လိုစဉ်းစားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ရှိသလဲ. သို့သော်ရှိသမျှသောခွေးကိုလူတိုင်းမဖြစ်. ငါစိုက်ပျိုးမှုကိုလက်မခံကြဘူး, တိုင်းခွေးကိုကယ်ဆယ်၏ညီတူညီမျှထိုက်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအရမောင်းနှင်တဲ့အယူအဆ, အားလုံးခွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းမာသူတို့ရဲ့လိုက်လျောပြုပြင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အညီအမျှဖြစ်ကြောင်းကို, လူဦးရေထူထပ်, litigious လူ့ပတ်ဝန်းကျင်. ငါစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ရှာမတွေ့ပါဘူး. ခွေးများသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော idiosyncratic များမှာ, လှသောဖောက်ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုး, မျိုးဗီဇ, အမှိုက်သရိုက်များအတွေ့အကြုံ, ကုသ, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်. တချို့က genial အေးဆေးများမှာ, စိတ်ထားအဘို့အရပ်ကြီး, နှင့်အချို့အကြမ်းမဖက်များမှာ, အမဲလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရပ်ကြီးနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြား. ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်သူတို့အားအပြုအမူတွေအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်လေ့ကျင့်ရေးကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အချိန်ရှိသည်. ခွေးကိုမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့အိပ်မက်ဆိုးသက်သေပြနိုင်ပါတယ်, သင့်မိသားစု, နှင့်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်း; ညာဘက်တ, တစ်ဦးသောဝမ်းမြောက်ခြင်း.
တချို့ခွေးတွေလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်, တချို့မပါဘူး; အခြားသူများကိုပင်သတိထားမိမည်မဟုတ်စဉ်အချို့မိုဃ်းချုန်းမှလွှဲမည်; ဦးထုပ်နှင့်အခြားသူများကိုအလိုရှိစက်ဘီးအချို့အမုန်းတရားကလူ. သင်အမြဲ ကြိုတင်. ဤ oddities မသိရနိုင်; သတိနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အားလုံးကိုပိုပြီးအကြောင်းပြချက်.
အဘယ်သို့ငါ, Conversation Dead Zone ကိုရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်အပြင်ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏ကြဉ်ရှောင်နိုင်?